Fa maninona moa ny Fiangonana no mifady sy miady amin’ny fisotroana sy fidoroana – FJKM Ambavahadimitafo Fa maninona moa ny Fiangonana no mifady sy miady amin’ny fisotroana sy fidoroana |
Fa maninona moa ny Fiangonana no mifady sy miady amin’ny fisotroana sy fidoroana
Publié le 19 mars 2006 à 08:03
Famelabelarana nataon’dRavelomanantsoa Rivo, filohan’ny Rantsana Fanantenana Foibe FJKM tamin’ny Alahady 19 mars 2006 tao amin’ny Akany Ralibera Daniel
Ny Mpandrindra RALAMBOMAHAY Mino no nitarika ny fotoana , notron’ny Mpitandrina RAKOTOARITSIFA. Natomboka tamin’ny vavaka ny fotoana sy teny fohy fanazavana momba ny Tetik’asa ary narahin’ny filazalana momba ny fandaharam-potoana.
Dia avy eo , natolotra ny Mpadahan-teny ny sehatra.
Teny fampidirana : Tamin’ny taona 1970 no nitsangana ho Sampana Vovoko Manga ( SVM) ny VokoVoko Manga. (VVM) Ny fitsipika fototra dia lany tamin’ny Synaoda lehibe.
Mifady taoka tanteraka ny Vovovoko Manga. Jesoa Kristy no fototry ny fiangonana FJKM ka , ny teny hambaran’ny TOMPO no tokony hampiarina amin’ny fiainana ny olombelona..isan’andro
1 – Tsy nampianatra amin’ny ny fisotroan-toaka i Andriamanitra :
« Aza misotro divay na toaka hianao na ny zanakao, mba tsy ho faty hianareo … » Levitikosy 10,9
« Dia hifady divay sy toaka izy; tsy hisotro divay efa maharikivy na toaka efa maharikivy izy,ary tsy hisotro ranom-boaloboka izy, na hihinana voalomboka akory, na ny lena na ny maina » Nomery 6,3 “
« Nefa ireo koa dia miraingiraingy azon’ny divay ary mivembena azon’ny toaka; resin’ny divay ireo; Mivembena azon’ny toaka izy; Miraingiraingy amin’ny fahitana izy ary midoladola eo amin’ny fitsarana. Fa feno loa sy loto ny latabatra rehetra, ka efa tsy misy madio hitoerana .”Isaïa 28:: 7,8″
« Ary mitandrema, fandrao ny fonareo hovesaran’ny vokatry ny fisotroan-toaka sy ny fahamamoana ary ny fiahiahian’n’izao fiaianana izao, ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany » Lioka 21 :34
« Fa miharihary ny asan’ny nofo, dia izao : fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana,fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adi-lahy, fiafonafonana, fifampandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamoana, filalaovan-dratsy, ary ny toy izany, izay lazaiko aminareo rahateo, tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan’Andriamanitra » Galatianina 5: 19-21
2 – Loza ny misotro taoka :
« Mpaniratsira ny divay, ary mpitabataba ny taoka, koa izay miraikiraiky azon’izany dia tsy Hendry« , Ohabolana 20:1 :
« Lozan’izay mifoha marina koa ka mitady toaka !izay miboboka mandra-paharivan’ny andro ka ampirahetin’ny divay !« , Isaïa : 5 :11
« Loza’izay mampisotro divay ny namany, dia hianao izay manampy fahatezerena ka mampahamamo azy mba hijery ny fitanjahany » Habacuc 2 : 15
« Mialà, mialà amin’ny làlandratsinareo, fa nahoana moa no te ho faty hianareo », Ezekiela 33 : 11b
3 – Satria Tsy mahafaly an’Andriamanitra :
« Indro efa nataoko teo anoloanao androany, ny Fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza » Deotoronomia 30 15
« Tsy fantatareo va fa tempolin’Andriamanitra hianareo, ary ny Fanahin’Andriamanitra mitoetra ao anatinareo ? Raha misy manimba ny tempolin’Andriamanitra, dia mba hosimban’Andriamanitra kosa izy; fa masina ny tempolin’Andriamanitra, dia hianareo izany » 1 Korintianina 3 : 16 sy 17
4 – Tsy afaka miara mitoetra ny taoka sy ny fanahy masina :
« Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin’ny Fanahy masina, izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin’ Andriamanitra ? ka tsy tompon’ny tenanareo hianareo » 1Korintianina 6 :19
« Fa hoy izaho : mandehana araka ny Fanahy, dia tsy hahatanterakany filan’ny nofo hianareo. Fa ny nofo manohitra ny Fanahy, ary ny Fanahy manohitra ny nofo; ary mifanohitra izy roroa, mba tsy hahazoanareo manao izay zavatra tianareo » Efesianina 5: 16-17
Nisy avy eo fanontaniana sy fanehoan-kevitra nifanakalozana teo amin’ny mpanatrika sy ny mpandaha-teny.
Tsapa fa nahaliana tokoa ny lahateny , ary nandray anjara tamin’ny fandraisam-pitenenana ny tanora maro tonga teo. Natao tamin’io fotoana io koa ny fampiratiana ny sary sy ny laha tsoratra n’ ireo nandray anjara tamin’ny fifaninana nokarakarain’ny Tetikasa tamin’ny 2005.
Sary : 9 Lahatsoratra : 2
Marihina fa nandray anjara mavitrika ny AMA , nanolotra hira teny anelanelam-potoana. Nofarana tamin’ny fanalana hetaheta ny fotoana